rajujhallu, Author at Kavyalaya - काव्यालय - Page2of 2
१५ अशोज २०७७0comment
by rajujhallu १४ अशोज २०७७
by rajujhallu १० अशोज २०७७
ऊ भोको छ । भोक लाग्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो । निश्चित समयावधिमा भोक अनुभव हुन्छ । तर अत्याधिक भोक लाग्नु, भोक मात्रै लागिरहनु अस्भाविक स्थिति हो । असजिलो अवस्था हो…
Anniversary EditionSaturdayकलमफ्रि राइटिङ
by rajujhallu १३ असार २०७७
लेखेर सबथोक हुनसक्छ ? जस्तो दु:खबाट मुक्ति, निराशाबाट छुटकारा ? या पीडाबाट केही क्षण, केही प्रहरको लागि बन्देज ? यो के साँचो हो ? लेखेर सबथोक भइरहेको छ ? मानिलिउँ,…
by rajujhallu २६ चैत्र २०७५
विध्यालयको झ्याल बाहिर एउटा भोको बालक अंगारले भित्तामा भ माने भात लेखीरहेछ ! क्याफेटरीयमा अर्को बालक, बर्गर लुछ्दै, बि फर बम पढिरहेछ ! हेर्नोस न सर ! यसरी शिक्षालयको गर्भबाटै…